आफ्नो भाग्य आफै बनाउँ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / आफ्नो भाग्य आफै बनाउँ
आफ्नो भाग्य आफै बनाउँ
Posted by: युगबोध in विचार January 7, 2019	Comments Off on आफ्नो भाग्य आफै बनाउँ 84 Views
मानिसहरु स्वभावै ले असल हुन् कि खराव हुन् यसमा अने कौ मत छन् । कसै ले भन्छन्– मानिसको जात घमण्डी र स् वार्थी हुन्छ । कसै ले भन्छन् मानिस स्वभावलै असल हुन्छ । तर नराम्रो वातावरण र कुसंगतले गर्दा नै मानिस खराब बन्न पुग्छ । धे रै को बुझाइमा मानिस असल खराब धनी गरिव जे जस्ता छन् त्यो सबै भाग्य र पूर्वजन्मको खे ल हो , यो सबै ईश्वरको लीला हो  । गनेर् गराउने उही नै हो  । तर को ही भन्छन्– यो के ही हो इन । हरे क मानिसले आफ्नो भाग्य आफै बनाउन सक्छ । हाम्रो समाजमा थरीथरीका मानिस छन् । को ही कुरा मात्रै गनेर् छन् काम पटक्कै गदैर् नन् । को ही कर्मवीर छन् खाली हात बस्दै नन् । के ही न के ही काम गरिनै रहे का हुन्छन् र को ही चाहि कुरा गर्न पनि नजान्ने र काम गर्न पनि नजान्ने जे जस् तो छ त्यसै मा दिन बिताउने गर्दछन् । हाम्रो समाजमा एउटा उखान हाल्ने गर्दछन् । पण्डितको घरका मुुसा पनि पण्डित नै हुन्छन् ।
यसको मतवल हो संगतले मानिस असल र खराव बन्न सक्छ । के ही दशक अघिका मानिसहरु पे ट पाल्नको लागि जंगलमा भांै तारिन्थे  । ढुंगाको हतियार र धुनवाण लिई शिकार गर्न जान्थे  । जंगल र पानीको नजिक पारे र छाप्रो हरु बनाइ बस् ने गर्दथे  । क्रमशः वरपर खनखो रस गर्न थाले  । पशुपालन र खे तीको काम गर्न शुरु गरे  । त्यसपछि ते रो मे रो भनाभन हुन थाल्यो  । क्रमशः टुकी बल्ने ठाउहरुमा बिजुली बत्ती बल्न थाले  । सडकमा गाडी चल्न थाले  । उत्पादन भएका वस् तुहरु गाउ–गाउबाट शहर पुग्न थाले  । विकास हुदै गयो । नया“–नया“ खे ती प्रविधिहरु शुरु भए उत्पादन राम्रो हुदै गयो  । धन सम्पत्ति जम्मा गर्न थाले  । धन सम्पत्ति जम्मा गर्दागदैर् धनी र गरिव वर्ग बन्न थाल्यो  । टाठाबाठा र सो झा व्यक्तिहरु दे खिन थाले  । कलह र अशान्ति फै लिन शुरु भयो  ।
यसै क्रममा विकासको गति पनि बढ्दै गयो  । नया“–नया“ उन्नत बीउको प्रयो गबाट राम्रो उत्पादन पनि हुन थाल्यो  । उत्पादन बढ्दै गर्दा रो ग र किराहरुको पनि बृद्धि हुन थाल्यो  । त्यसको रो कथाम गर्न विभिन्न किसिमका विषादीहरुको प्रयो ग गर्न थालियो  । उत्पादन त राम्रै दे खियो  ।
के ही वर्षयतादे खि जथाभावी विषादीहरुको प्रयो ग हुन गएबाट हामीहरुको स् वास् थ्यमा धे रै नै नराम्रो असर दे खिन थाले को छ । अझै भन्नुपर्दा अन्न र फलफूल बारीहरुको तुलनामा तरकारी बालीहरुमा त अति नै विषादीको प्रयो ग हुने गरे को पाइएको छ । यसले गर्दा जो को ही व्यक्तिहरुले पनि बजारबाट हरिया तरकारीहरु किने र खान डरलाग्दो स् िथति भइसके को छ । मानिसलाई नभइ नहुने कुरा खाद्य वस् तु नै हो  । त्यही नै बिग्रन गए कसरी पो प्राण बचाउन सकिएला र ? तसर्थ रासायनिक विषादीको प्रयो ग गर्नुभन्दा जडीबुटीहरुबाटै कीराहरुको नियन्त्रण गनेर् बानी बसाले मा यस् ता समस् याहरुबाट सहजै बच्न सकिन्छ । यस बारे मा सम्बन्धित निकायहरुबाट रासायनिक विषादीको बढी प्रयो ग गर्नाले हाम्रो स् वास् थ्यमा धे रै असर पनेर् हुदा यसको बदलामा घरे लु तरीकाबाटै कीरा नियन्त्रण गनेर् बानी बसाल्नु लाभकारी हुन्छ भन्ने बारे मा प्रत्ये क वडा वडामा तालिमको व्यवस् था गर्न सके धे रै नै प्रभावकारी हुन जाने थियो  । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान नपुगे को हो वा ध्यानै नदिएको हो ? यसबारे मा ध्यान दिनु अति नै जरुरी छ । यदि हामीहरुले गाउ“घरमै प्राप्त हुने घरे लु जडीबुटीहरु प्रयो ग गनेर् गरे न आर्थिक भार नै पनेर् न त स् वास् थ्यलाई नै हानी पु¥याउने  । त्यसै ले यसतर्फ सबै को ध्यान जानु जरुरी छ ।
हाम्रो गाउ“घरमा पाइने नीम, तिते पाती, असुरो , चिउरीको खली, खुुर्सानीको धुलो , सिस् नो को पात डाठ, गाईको मूत्र आदिबाट कीराहरुको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस् तै सिस् नो को प्रयो गबाट तरकारीमा लाग्ने लाही कीरा झुसुले कीरालाई राम्रो सग नियन्त्रण गर्दछ । यसको साथै घरभित्रका उडुस, उपिया र साङ्लाहरुको पनि नियन्त्रण सकिन्छ । सिस् नो को झो ल बनाउदा सिस्नो लाई स–साना टुक्रा बनाउने  । उक्त टुक्रालाई नौ लिटर पानीमा १०/१५ घण्टासम्म भिज्न दिने । त्यसपछि उक्त पानीमा थो रै पानी थपे र बो ट विरुवामा छनेर् गरे झुसुले र लाही कीरालाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अब आफै विचार गर्नुहो स् यति सजिलो सरल प्रविधि हुदा हुदै किन रासायनिक विषादीको प्रयो ग गनेर् त ? हुन त हामीहरुमध्ये कतिपयलाई यस बारे मा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर आफ्नै हातले एकपटक प्रयो ग गरी हे र्नुहो स् तब मात्र विश्वास गर्नुहुने छ । यदि कसै लाई आप खान दिनुभयो भने त्यसको स् वाद के ही क्षणमै विर्सन सक्छ । तर त्यसलाई आपको खे ती प्रविधिबारे जानकारी गराउनुभयो भने त्यसले जीवनभर विर्सन सक्दै न र फलको स् वाद पनि पछिसम्म पाउन सक्छ । अब गल्तीहरु नदो हो ¥याउ“ । विषले कहिल्यै पनि राम्रो गदैर् न । त्यसै ले अबदे खि विषादी प्रयो ग गनेर् बानी त्यागौ ं । घरे लु तरिकाबाटै कीरा नियन्त्रण गरांै  । यसै बाट नै हामीहरुको दिर्घायु हुने छ । अब आफै मनन गरौ ं र आफ्नो भाग्य आफै बनाउन सिकौ ं । यस मा नै हामी सबै को कल्याण हुने छ ।
Previous: बालविवाह रोक्ने प्रतिबद्धता
Next: दाङ पर्या–पर्यटनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ
परिस्थितिलाई असहज बनाउने रणनीति